Izifo ezenza inja iyeke ukukhonkotha | Izinja Zomhlaba
Izifo ezivimba inja ukukhonkotha
Lapho sibhekene nanoma ikuphi ukuziphatha okungajwayelekile ezilwaneni ezifuywayo, into efaneleke kakhulu ukuba ngumqapheli bese siyiyisa kunoma yimuphi uchwepheshe wezokwelapha uma kunesidingo ukuze kutholakale ukuxilongwa okufika ngesikhathi, futhi yize izifo eziningi abantu abahluphekayo zifana nezinja, kungenzeka ukuthi ezinye izifo ezizohlupheka ziwumphumela wezinye ukuguquka kwesifo esilwayo (kusuka kubantu kuya ezilwaneni noma okuphambene nalokho) ngakho-ke, lobu bubi bungabonakala ngendlela ethile futhi bungelapheke.
Kukhona namanye amacala lapho kumane kungumbuzo ukukhubazeka emzimbeni yezilwane ezifuywayo, ngoba kungenzeka kube yinto engahambi kahle endleleni yabo yokukhonkotha.
1 Izizathu zokuthi kungani inja yethu ingakwazi ukukhonkotha
2 Izifo eziphethwe yizinja ngezwi
2.2 Izicubu, ukuvuvukala kwamathansela nokukhwehlela kennel
2.3 Ukukhubazeka kwelulary
3 Ezinye izimbangela ezenza inja yakho ingakhonkothi
3.1 Ukususwa kwentambo yephimbo
3.4 Uhlobo lwezinja olungakhonkothi
4 Yini okufanele uyenze ukwenza inja yami ikhonkothe ​​futhi?
Izizathu zokuthi kungani inja yethu ingakwazi ukukhonkotha
Ngezizathu ezingachazeki, uma inja yethu inenkinga lapho ikhonkotha noma imane ikhiphe umsindo ongajwayelekile wokukhonkotha, kungcono-ke ukuthi umlingani wethu ahlangane inkinga yokwakheka, ngakho-ke ngezansi sizokutshela okuncane ngalokho okufanele ukwenze kuleli cala.
Inkinga yokukhonkotha ingafingqwa ngomphimbo, ikakhulukazi imicu yezwi, futhi inikezwe ukuthi iminyene kangakanani imisipha yezwi yezinja, zingakhonkotha ngamandla amakhulu.
Izindunu zakho zinemigqa exhunywe kuqwanga, izingxenye ezinokuhamba okufanele komoya nengcindezi ezingakhipha umsindo onamandla.
Enye yezincazelo ezilula kakhulu zokukhwehlela enjeni ukuthi inani elithile lamafinyila lihlala ezintanjeni zezwi futhi lidale ukuthi kube khona ukukhwehlela lapho kukhulunywa nokwenza imisindo. Izimo zomqala Zibangelwa yizinkinga zalolu hlobo ngoba yizo, ezingeni elikhulu, ezingadala ukushuba noma amandla amancane okukhonkotha.
Izifo eziphethwe yizinja ngezwi
Yize kuyiqiniso ukuthi kunezifo ezithinta izitho ezithile nemisebenzi yokwakheka kwenja, zikhona nezifo ze ukuthanda komphimbo.
Lezi kungaba yinkinga yesimo esithathelwanayo esiphazamisa ukusebenza kwe- ibhodi yomsindo wenja ukudala ukulahlekelwa emandleni okukhonkotha; ngobukhona besikhunta, isicanucanu nokukhwehlela (imvamisa lapho inja idla noma iphuza).
Yingakho Ihhanisi lingakunciphisa ngokuphawulekayo lokhu kuhlaselwa komphimbo yesilwane futhi ngaleyo ndlela ugweme ukuthi lokhu kubeka umphimbo wakhe ekucindezelekeni okukhulu.
Akudlula konke ukuvuvukala kohlelo lwe-resonance, into ebangela ukushaqeka, ukungakwazi ukukhonkotha ngisho ne-aphorism nemvelaphi yayo kungaba ngenxa yokukhwehlela ngokweqile noma ukukhonkotha. Imvelaphi yalokhu kukhwehlela okuqhubekayo kungenzeka ukuthi kungenxa yezinye izimbangela ezingadingeki ukuthi zihlobane nokutheleleka kepha futhi kungaholela kwesinye.
Izicubu, ukuvuvukala kwamathansela nokukhwehlela kennel
Lokhu kukhwehlela kungenzeka ngenxa ye- amalaka izifo noma iyiphi enye indawo yomphimbo, izicubu noma ukukhwehlela kennel. Ngakho-ke, ekwelapheni kwayo kuyadingeka ukwelapha imbangela eyinhloko futhi udokotela wezilwane uzobhekana nokuyixilonga nokuhlela ukwelashwa okufanele.
Ezimweni ezimbi kakhulu lapho inja ingakaze ibe nesiqephu eside se- ukukhonkotha noma ukukhwehlela, kepha ukuthi ngendlela efanayo kulahlekelwe ukukhonkotha, lapho-ke kukhona icala lokukhubazeka komphimbo.
Yize leli cala libonakala nje likhona ezinhlotsheni ezinkulu zezinja ezinjengeLabrador, iGolden Retriever, i-Irish Setter noma iSaint Bernard, ezinhlotsheni ezinjengeSiberia Husky noma i-English Bull Terrier, lokhu kukhubazeka kuyisici sofuzo.
Ezinye zezimpawu zalesi simo yilezi umsindo odumayo lapho uphefumula ngesikhathi nangemuva kokuzivocavoca, okugcina kuphinde kwenzeke ngesikhathi sokuphumula futhi ezimweni ezimbi kakhulu ukukhonkotha kumane kwenziwe buthaka kuze kube yilapho kungezwakali ngokuphelele futhi kulapho kudingeka ukungenelela okubucayi kakhulu ukubhekana nenkinga.
Ezinye izimbangela ezenza inja yakho ingakhonkothi
Ngaphezu kwezifo esizibonile, futhi ezingachaza isizathu esenza inja yakho iyeke ukukhonkotha, kunezinye izimbangela ezingadala lokhu kuziphatha. Kulula ukuthi wazi ukuthi unalo lonke ulwazi olukhona.
Ngale ndlela, uma ubona ukusebenza okungajwayelekile esilwaneni sakho, uzokwazi ukuthi ungazilindela kanjani izinkinga, futhi ngazo, uzame ukuzixazulula ngendlela efanelekile. Phakathi kwalezi zizathu, unakho okulandelayo:
Ukususwa kwentambo yephimbo
Beka kanjalo, kuzwakala kunesihluku impela. Futhi kunjalo. Njengaleyo nkambiso yeminyaka eminingana edlule lapho kwakuyinto ejwayelekile ukusika imisila nezindlebe zezinhlobo ezithile zezinja, eziningi manje sezisuswa ekususeni izintambo zezwi.
Njengoba igama laso libonisa, Kungumsebenzi wokususa izintambo enjeni. Ngale ndlela, ngeke isakhonkotha. Empeleni, yinto abayenza emidlwane eminingi ukuze bayithengise kangcono, kepha isabanonya kubo.
Khumbula ukuthi ukukhonkotha, kanye nemisindo abangayenza, kuyingxenye yokuxhumana kwabo, futhi ubaphuca kona.
Esinye isizathu esenza inja yakho ingakhonkothi kungenxa yokuhlukumezeka. Lokhu kuvame kakhulu ezinjeni ezitholwa, ngoba kungenzeka ukuthi babe nokuhlangenwe nakho okubi nomnikazi wabo wangaphambilini, ngokwesibonelo, ngubani osebenzise izindlela ezenze ukuthi isilwane sihlale sisaba ukwenza umsindo, ukujeziswa, noma amakhola ejwayelekile okulwa namagxolo.
Kwesinye isikhathi, ngokubekezela, uthando, nosizo oluncane kochwepheshe, ungakususa lokhu kuziphatha, kepha kunzima impela futhi bakuthola kunzima ukukhohlwa lezo zikhathi abake baphila kuzo. Okufanayo kungenzeka uma kukhona ukuhlukumezeka emndenini ahlala kuwo, ngoba lokhu ukuhlobanisa nokukhonkotha uqobo.
Ukungezwa nakho kuyinkinga ehlobene nokukhonkotha. Futhi yilokho, uma ungezwa ukukhonkotha kwabanye, ngeke ukhonkothe. Futhi ngokungalaleli okwakhe, akazi ngempela ukuthi uyakhonkotha noma cha, yingakho izinja eziningi ziyema ngoba azizilaleli.
Kulokhu, ubumpumputhe bungaba nesixazululo, kepha kunezimo lapho, kungaba ngenxa yesifo anaso, noma ngenxa yeminyaka yakhe ... azishiyi indawo eningi yokuqondiswa odokotela bezilwane.
Uhlobo lwezinja olungakhonkothi
Ekugcineni, sifuna ukukhuluma nawe ngezinhlobo zezinja ezingakhonkothi. Lokhu futhi kungaba yisizathu sokuthi inja yakho ingakwenzi, futhi iningi lethu liyakhohlwa ukuthi uhlobo ngalunye lwenja lunezici ezithile ezingabonakala enjeni yakho.
Empeleni, akukhona ukuthi abakhonkothi, kepha ngokuqinisekile abakhonkothi kaningi, futhi kwesinye isikhathi kunganikeza umbono wokuthi abakaze babe nawo. Ngokwesibonelo, une-labrador retriever, inja edlalayo futhi enothando, kodwa engakhonkothi ngokweqile. Eqinisweni, ikwenza kuphela lapho kunengozi ngempela; noma inja yaseNewfoundland, amakhulu kakhulu futhi aheha ukunakwa, kepha ungakhonkothi kaningi (njenge USaint Bernard). Ezinye izinhlobo zingaba yi-Great Dane, enkulu kakhulu, kepha futhi ethule; noma i-Husky yaseSiberia, inja engakhonkothi kakhulu, futhi uma yenza lokho kubonakala njengokuhhewula kunokukhonkotha kwangempela.
Ohlotsheni oluncane, kukhona nabanye abakhonkotha okuncane kakhulu, noma mhlawumbe hhayi nhlobo, njenge bulldog noma ama-pugs.
Kulokhu, akunakubuzwa ukukhonkotha okuningi uma sekuvele kunguhlobo olungafuni.
Yini okufanele uyenze ukwenza inja yami ikhonkothe ​​futhi?
Manje njengoba usuzibonile izifo nezimbangela ezingenza inja yakho iyeke ukukhonkotha, ngokuqinisekile ufuna ukwazi ukuthi wenzeni ukuyibuyisela esimweni sayo esijwayelekile. Iqiniso liwukuthi Noma isiphi isici esishintshile enjeni yakho sidinga ukuvakashelwa kudokotela wezilwane.
Okokuqala nje, uchwepheshe uzohlola isilwane sakho, ngaphezu kokulalela okushoyo ngokushintsha kokuziphatha, uma ngabe kukhona okwenzekile ukufakazela lokhu kuthula, njll. Lapho konke sekuhloliwe, ungakufaka ekuhlolweni okuthile. Zibalulekile ukuze zikwazi ukunikeza ukuxilongwa ngokunembe ngangokunokwenzeka, ngakho-ke, ungesabi umthethosivivinywa; noma ngabe unesabelomali esiqinile, kufanele usazise.
Uma konke sekwenziwe, izokunikeza umphumelaKungenzeka ngenxa yokugula, ukuhlukumezeka, noma ukugula ... Esimweni sokuba yisici sohlobo kungenzeka ukuthi akukho okwenziwayo, kepha kunalokho ukucela ukuthi ukubheke ukuze ubone ukuthi awukhonkothi yini, noma benza njalo okuncane awukhumbuli.
Ngezifo, eziningi zingaxazululwa kusetshenziswa ukwelashwa okususelwa emithini iqonde ngqo kulesi sifo onaso. Kepha kukhona okunye okungenakuguqulwa, nokuthi isilwane kumele sivumelane nokuhlala nabo.
Ekugcineni, enye inketho ongayithatha ingukuthi iya kuchwepheshe ekuziphatheni kwezilwane. Laba banjengo "psychologists" bezinja, futhi bazisize zishintshe isimo sazo sengqondo futhi zibuyele kulokho ezazikhona ngaphambili. Eqinisweni, ngesinye sezixazululo ezinhle kakhulu lapho inja ihlukumezekile ngoba iyabasiza badlule kulowo mzuzu futhi babuyise ukuzethemba kwabo nenjabulo.
Njengesiphakamiso, futhi ukusiza inja yakho ukukhonkotha futhi, Ungacabanga ukumkhipha ukuze uyozijabulisa nezinye izinja. Hhayi lokho kuphela, kodwa futhi dlala futhi uxhumane nabo. Lokhu kubalulekile ngoba kuyabasiza babone ukuthi lokhu kuziphatha (ukukhonkotha) akuyona into embi, kepha kuyingxenye yabo.
Uma kwenzeka ukuthi lesi sifo singezintambo zezwi, kepha siyabuyiselwa emuva, ungasebenzisa futhi amakhambi asekhaya, njengokufakwa komphimbo, ukuze usithambise futhi ungasenzi sibe buhlungu. Inhloso ukululama ngokushesha okukhulu ukukhonkotha futhi.
Noma ukugula kwabo kubenza balahlekelwe izwi labo, banezindlela eziningi zokuxhumana nezinja noma nabantuAkufanele zilahlwe ngenxa yalesi sizathu noma zicabange ukuthi azisasizi ngalutho.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Izifo ezivimba inja ukukhonkotha
Inja yami yenza umsindo ngathi ayikwazi ukukhonkotha kusuka emphinjeni, asimtholanga ukuthi ahlale nezinja eziningi, kungaba yini?
zingaba yingozi kangakanani lezi zimo noma zingabonakalisa miphi imiphumela emikhulu. Ngine-chihuahua eyeke ukukhonkotha ezinsukwini eziyi-5 ezedlule. kodwa udla kahle futhi uphuza amanzi futhi uyasebenza kodwa kungekudala nje kwafa enye inja enkulu
Emasontweni ambalwa edlule inja yami yehlise ukukhonkotha, bekungukukhalaza kakhulu uma othile ekhala insimbi ... manje engakhiphi bark.
Inja yami iyekile ukukhonkotha kepha uma idla ukudla kwayo ... kepha manje ayisaphuzi manzi amaningi ... yenza sengathi iyahlanza ... yini engingayenza noma ngiyinike okuthile
Yini okufanele uyenze uma inja yami idle isokisi?
Ungazi kanjani ukuthi umdlwane ngowesifazane noma owesilisa?